Islaan Ciise ?Guddiga xalinta khilaafaadka waa inaan lagu fara-gelin howshooda shaqo? (Dhegeyso) – Radio Daljir
Diseembar 29, 2013 7:34 b 0
Garoowe, December 29, 2013 – Qaar kale oo ka mdi ah Isimada Puntland ayaa maanta shir ku yeeshay magaalada Garoowe, iyagoo soo saaray baaq ay kaga hadlayaan doorashada dhow ee la filayo 8 janaayo 2014-ka.
Islaan Ciise Islaan Maxmed oo Isimada shirayey isagu marti-geliyey ayaa kulanka shir gudoomiyey, waxaana aad looga dooday arrimaha doorashada, Isimada ayaa sheegay inay muhiim tahay xasilooni iyo in doorashadu xilligeeda dhacdo.
Islaan Ciise ayaa ku dhawaaqay in guddiga ansixinta iyo xalinta khilaafaadka ee baarlamanka Puntland ay awood u leeyihiin shaqadooda iyo go?aan ka gaarista kala saarida xildhibaanada cusub.
Wuxuu xusay inaan lagu fara-gelin karin howshooda. Isla markaasna isimadu ay kalsooni ku siin doonaan guddiga howsha loo dhiibay iyo masuuliyada saaran.
Baaqa ka soo baxay Isimada Puntland maanta oo dhowr qodob ka koobnaa ayaa lagu xusay in Isimadu shirar kala madax banaan yeesheen, waxaa baaqa maanta lagu dhaliilay go?aankii shalay ka soo baxay qaar kale oo ka mid ah Isimada.
Marka laga yimaado degniinta isamada ee la xiriirta awoodda guddiga xalinta khilaafaadka waxaa kaloo ku jirtay qodobada in aan doorashadu dib uga dhicin xilligeeda, iyo in laga wada shaqeeyo amniga guud ee Puntland.
Bayaanka ka soo baxay Isimada Puntland oo uu shir gudoomiyey Islaan Ciise Islaan Maxamed ayaa yimid xili shalay ay go?aamo soo saareen Isimada Puntland ee iyana ku shirsanaa Garoowe qayb ka mid ah, kuwaas oo uu shir gudoomiyey Boqor Burhaan Boqor Muuse.
Dhegeyso: – Suldaan Bashiir Kownte oo Isimada ku jira ayaa akhrinaya Bayaanka maanta soo baxay
Baahin: Axad, 29- Dec, 2013 -Caawa Iyo Daljir Weriye Cabdifataax Cumar Geeddi ~ Daljir ~ Garowe